कुलमान घिसिङको पु’नर्नियुक्ति न’हुनुको कारण खु’लासा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुलमान घिसिङको पु’नर्नियुक्ति न’हुनुको कारण खु’लासा
कुलमान घिसिङको पु’नर्नियुक्ति न’हुनुको कारण खु’लासा
नि प्रधानमन्त्री ओलीले इ’न्कार गरेको बताएका हुन्।
‘तपाईं ऊर्जामन्त्री भएका बेला सबै नागरिकले चाहेका कुलमान घिसिङलाई किन वि’द्युत् प्राधिकरणमा पु’नर्नियुक्ति दिनु भएन नि ? ’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले त यसको जवाफ सान्दर्भिक छैन। तैपनि म ऊर्जामन्त्री छँदा मैले कुलमान पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लिएर गएको हुँ, नियमित च्यानलबाट पनि र म आफैंले सिधै पनि। तर कार्यान्वयन भएन।’
त्यति मात्र होइन, आफूले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रस्ताव राखेको उनले बताए। ‘तर उहाँले मान्दै मान्नु भएन, यो कुरा क्याबिनेटका २५ जनालाई थाहा छ,’ पूर्वऊर्जामन्त्री पुनले भने, ‘यो कुरा अहिले त सान्दर्भिक छैन उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) काम गर्ने मान्छेलाई समेट्ने सोच भएको मानिस हैन।’
संसद् वि’घटन भएकै दिन नेकपा नेता पुनसहित ७ जनाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
काठमाडौँ / यतिबेला संसद वि’घटन प्रकरणले देशको राजनीति तातेको छ । सत्तारुढ नेकपा दुई फ्याक भएको छ । प्रचण्ड नेपाल र ओली पक्षले आआफ्नै अ’डान लिईरहेका छन् ।यही बखत बामदेव गौतमलाई नेकपाको गेम चेन्जरको रुपमा हेरिएको छ । गौतम अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षमा खुलेरै लागेका छैनन् उनी त’टस्थ छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम मात्र सचिवालयका त्यस्ता नेता छन् जो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा कुनैपनिमा गएका छैनन् । तटस्थ अवस्थामा रहेका गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भने दुवैको जारी रहेको छ ।गौतमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास जारी राखेका छन् । उनलाई विश्वासपात्रमार्फत् पार्टीको दोस्रो वरियताको अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थमध्ये रोजेर दिने सम्मको प्रस्ताव पुगेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार भैंसेपाटीमा ओ’लीनिकट प्रभावशाली नेताहरु पुगेरै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।पछिल्लो समय अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा ओली पक्षका महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमलाई भेटेर अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको चाहनाबारे सुनाएका थिए ।गौतमले भने आफू तटस्थ बसेर पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने जवाफ दिएका छन् । उनले यो फुटले नेकपाको दुवै पक्ष निकै कमजोर हुने भन्दै कुनै पनि पक्षमा आवद्ध नहुने अडान कसेका छन् ।
बरु उनी छुट्टै समूह बनाएर भविष्यमा समेत एकता बनाउन लाग्ने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ ।नेकपाको अहिलेको फुटको अवस्थामा ओली र प्रचण्ड दुवैतर्फ सचिवालयका ४४ जना छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा बामदेव तटस्थ बसेका हुन् । हिजो बादल ओली पक्षमा पुगेपछि बराबरीको अवस्था बनेको हो ।स्थायी कमिटीमा भने प्रचण्ड पक्ष बहुमतमा छ । प्रचण्डको साथमा २७ जना छन् । ओलीको पक्षमा १५ जना छन् ।
कुल ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा बामदेव तटस्थ हुन् ।
मेयर फागोले फैलाएकाे भ्रमप्रति सदीक्षा लाइभमा (भिडियाेसहित)
यस वर्षबाट किसानलाई पेन्सन दिन्छौ : कृषि मन्त्री यादव
बिध्याको सासु नबोल्नु को कारण एस्तो ? झु;न्डि;ए;को देख्ने पहिलो छिमेकि’ एस्तो भन्छन : हेर्नुहोस भिडियो